Triple Luck for Everybody (လူတိုင်းအတွက် Triple Luck) Triple Luck For Everyone
Language: English မြန်မာ
Search Job အလုပ်ရှာရန်
Help Home ကူညီပါရစေ
Job Industry Reference လုပ်ငန်းအုပ်စုအညွန်း
Job Function Reference အလုပ်အကိုင်အုပ်စုအညွန်း
SignIn || Login
Job Adv Countအလုပ်ကြော်ငြာပေါင်း
Triple Luck Beta version can only search job.
You can create account, upload cv, post job adv for demo purpose.
All data you created will remove daily basic until further announcement. Triple Luck ကုမ္ပဏီမှ အစမ်း လွင့်တင်ထားသော ဝန်ဆောင်မှုတွင် အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေခြင်းသာ ပြုလုပ် နိုင်မည်။
အကောင့်ပြုလုပ်ခြင်း၊ CV လွင့်တင်ခြင်း၊ အလုပ် ခေါ်စာကြော်ငြာ ခြင်းများကို အစမ်းသဘော ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အစမ်းသဘော ပြုလုပ်ထားသော အချက်အလက်များကို နေစဉ်ပယ်ဖျက်မည်။ အမှန်တကယ် အချက်အလက်များ သိမ်းဆည်း အသုံးပြုနိုင်မည့် အချိန်ကိုပြန်လည် ကြော်ငြာပေးမည်။
အလုပ် လျှောက်ထား လိုသူများ CV ဖေါင်ကို Triple Luck ကုမ္ပဏီ အီးမေ(လ်)လိပ်စာ TLServiceTeam@gmail.com သို့ ပေးပို့၍ဖြစ်စေ၊ လူကိုယ်တိုင် Triple Luck ရုံး လိပ်စာ အမှတ်(၉၁ဘီ)၊ စဉ့်အိုးတန်းလမ်း (အထက်)၊ လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ သို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
Welcom to Triple Luck Employee Agency
We offer absolute free online service to Job Seeker and Employer. We wish our service can help Job Seeker found their dream job in the shortest period time at ease without any cost and Employer get the suitable quality employee for thier Business Operation with minimum cost and minimum man hour.
Triple Luck ဝန်ထမ်းရှာဖွေရေးအေဂျင်စီမှကြိုဆိုပါသည်။
ကျွန်တော်များအေဂျင်စီသည် အလုပ်ရှာဖွေသူများနှင့် ဝန်ထမ်းရှာဖွေသူများကို အွန်လိုင်းအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါပြီ။ အလုပ်ရှာဖွေသူများ မိမိတို့၏ ဝါသနာနှင့် လေ့လာထားသောပညာရပ်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် အလုပ်အကိုင်များကို အကုန်အကျစရိတ်မရှိဘဲ အချိန်တိုအတွင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် ဆုတောင်းပေးပါသည်။ ဝန်ထမ်းရှာဖွေသူများ မိမိလိုအပ်နေသော ဝန်ထမ်းနေရာများအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဝန်ထမ်းများ အချိန်တိုအတွင်း ငွေကုန်ကြေးကျသက်သာစွာဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် ဆုတောင်းပေးပါသည်။
<Quick Apply CV ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ဖေါင်အလွယ်တင်ရန်>
Job Industry လုပ်ငန်းအုပ်စုမှ
Job Function အလုပ်အကိုင်အုပ်စုမှ
Job Title အလုပ်အကိုင်ရာထူးမှ
Search By Job Industry လုပ်ငန်းအုပ်စုမှရှာဖွေရန် Show All အားလုံး:: Advance Search အသေးစိတ်ရှာဖွေ
ဗိသုကာ နှင့် အိမ်တွင်းအလှဆင်
Energy/Power/Water/Oil & Gas/Waste Management
Engineering - Construction, Civil/Quantity Survey
အင်ဂျင်နီယာဝန်ဆောင်မှု - ဆောက်လုပ်/တိုင်းတာ
Engineering - Electrical/Electronic/Mechanical
အင်ဂျင်နီယာဝန်ဆောင်မှု - လျှပ်စစ်/စက်မှု
အင်ဂျင်နီယာဝန်ဆောင်မှု - အခြား
Food and Beverage/Catering/Restaurant
General & Wholesale Trading/Distribution
General Management/Business Analysis
Industrial Machinery/Automation Equipment
Non-Profit Organisation/Social Services/NGO
လုံခြုံရေး နှင့် ဆက်စပ်
Good Coffee For Your breakfast.
Copyright © 2018 Triple Luck Co., Ltd. All Rights Reserved. Home | Help | Contact | Terms and Conditions